Gaariga waxyaabaha qarxa lagu qabtey ee Bosaso iyo saameynta uu reebay | SAHAN ONLINE
Gaariga waxyaabaha qarxa lagu qabtey ee Bosaso iyo saameynta uu reebay
Maalintii Arbacada waxaa ciidanka kontoroolka Bosaso ku qabteen gaari nooca xamuulka ah oo sidey khudaar uu ka soo qaadey magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Gaariga waxaa lagu soo qariyey oo uu xanbaarsanaa waxyaabaha qarxa oo aad u badn oo khatar ah sida qalabka sigaarsiinta ciidamada, qalab caafimaad, Anteeneeyin iyo qalab caafimaad.
Waxaa la aamnsan yahay in gaarigan uu dhaqaalaha ugu badan ee safarkiisa ka soo helay alaabtan wax lagu gumaado ee lagu soo qariyey.
Gaariga ayaa soo dhaafey dhamaan Kontroolada waa weyn ee Puntland laga soo bilaabo Gaalkacyo, waxa uu alaab ku dejiyey Burtinle, Garoowe iyo Qardho sida uu sheegay Taliyaha qaybta gobolka Bari.
Waa markii labaad sanadkan dhexdiisa oo ciidanka amaanka Bosaso ku sugan qabtaan alaab caynkan oo kale ah.
Wasiirka Amniga Puntland Cabdi Xirsi Qarjab ayaa wel-wel xooggan ka muujiyey ciidamada fadhiya Kontroolada Puntland ee gaariga caynkaas u miineysan uu dhaafey, waxaana la beddeley dhamaan ciidamadii ku jirey shaqada maalintii uu gaarigu dhaafey ee labada Kontrool ee Garoowe, Wasiirka ayaa sheegay in ay baarayaan halka uu alaabta ku dejiyey gaarigu ee Garoowe.
Garoowe waa caasimadda Puntland waxaa fadhiya xukuumaddii iyo hay’adaha ugu badan ee dalka ka hawlgala, waxaana gaarigan awood u yeeshey in uu gudaha u galo magaalada, sidoo kale gaarigan ayaa la sheegay in uu alaab ku dejiyey magaalada Qardho.
Horey Puntland waxay u soo saartey go’aan ah gawaarida alaabta ka keenta Koonfurta Soomaaliya in ay ku wareejinayaan gawaari kale magaalada Gaalkacyo, arrintan ayaa noqotey mid dhibaato kale ka dhalatey. Waxaa si weyn uga qayliyey maamulada Koonfurta Soomaaliya, Magaalada Beledweyne oo hadda gaarigan uu ka soo shiraacdey sida Booliska Puntland sheegay ayaa kamid ahayd meelaha sida weyn looga mudaaharaadey go’aanka Puntland ee xanibaada gawaarida Koonfurta.
Waxaa amaan xooggan loo jeediyey ciidanka feejigan ee Konroolka Boosaso, waxaa si weyn la isu weydiinayaa waxa Puntland ka beddeli doonto Kontroolada kale ee magaalooyinka Gaalkacyo, Garoowe iyo weliba Qardho. Dhanka kale waxaa la is weydiin sida Puntland ula xisaabtameyso maamulada Koonfurta ka jira ee baabuurtan ay iyaga ka yimaadeen kuwaas oo aan baaritaan marin gawaarida ka imaaneysa khatarna gelin kara maamulada deriska la ah.
Qaar kamid ah ciidanamada Konroolada taagan ayaan marin gawaarida baaritaan hubin ah, kuwa ay garanayaan waa sii daayaan, halka kuwa kale qudhooda ay afka wax ka weydiiyaan, gawaarida sida Xoolaha nool ayaanba la marin wax baaritaan ah.
Marka la eego weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Bosaso, waxaa hubaal ah in al-Shabaab iyo Daacish ay awood soo saareen dhulka Puntland gaar ahaan Bosaso, waxaana looga hortegi karaa iskaashi iyo ciidanka oo shaqadiisa u qabsada sida ugu wanaagsan iyo maamulka oo si joogta ah u bixiya ciidanka amaanka mushaharkooda iyo gunnooyinkooda kale.